Ijaarsa sirna dimokiraasii mirkaneessuuf hanqinoota waldaalee siivikii furuu
Taphawwan Guutuu Yunivarsitiiwwan Afrikaa - Saturday, 14 July 2018 00:55
Waancicha Faransaayi moo Kiroshiyaatu dhungata laata? - Saturday, 14 July 2018 00:53
Bataskaanittiin koree araaraa Ameerikaatti erguufi - Saturday, 14 July 2018 00:48
Bajatichi sirnaan hojiirra ooluu qaba - Saturday, 14 July 2018 00:19
“Aartiin fiixee qaramaa miira ummata tokkooti” -Doktar Abiyyi Ahmad - Saturday, 14 July 2018 00:15
Biyya tokko keessatti misoomni, bulchiinsi gaariifi dimokraasiin mootummaa ykn qaama tokko qofaan mirkanaa’uu kan danda’an miti. Kunis, dameewwan kunneen kan hojjetaman qaama tokkoon osoo hintaane walta’iinsa mootummaa, paartiilee siyaasaafi waldaalee siivikii, akkasumas hawaasa bal’aan ta’uu kan mul’isuudha.
Gama kanaan wayita ilaalamu waggoota kurnan lamaan darban keessatti sochiin hawaas-dinagdeefi siyaasaa hanga barbaadame ta’uu baateyyuu fooyya’aa dhufuusaa ragaalee tokko tokkorraa hubachuun kan danda’amuudha. Ta’us, baay’inniifi fedhiin ummata biyyattii yeroodhaa yerootti akkuma dabalaa deemu, lakkoofsiifi gaheen waldaalee siivikii hangam bu’aa buusuu danda’eera?
Kanuma ilaalchisuun Kibxata darbe, dhaabbatni ‘Vision Ethiopian Congress For Democracy’ jedhamu ijaarsa sirna dimokraasii keessatti gahee waldaaleen siivikii qabanirratti waltajjii maree qopheessee ture.
Waltajjii kanarratti hayyuuleefi xiinxaltootni siyaasaa kan hirmaatan yoo ta’u, gahee waldaaleen kunneen qabaniifi rakkoolee mudachaa jiranirratti yaadasaanii ibsaniiru.
Yunivarsiitii Metiropolitiyaanii Kotobeetti Gorsaa Seeraa kan ta'an Doktar Tasfaayee Mollaa, akka Itoophiyaatti waldaaleen siivikii kan hundaa’an baroota 1960ta dura ta’uu dubbatu. Wayita hundaa’anis bu’aa dhuunfaa isaanii kabachiisuuf osoo hintaane fedhii ummataa guutuuf akka ta’edha kan himan. Kallattii kanaan oggaa ilaalamu, biyyattiitti ijaarsa sirna dimokraasii, bulchiinsa gaariifi misooma mirkaneessuuf gaheen waldaalee siivikii muraasa ture jechuun ibsu.
Keessumattuu, waldaaleen kunneen qabiinsa mirga namummaa eegsisuufi seerota mootummaaa kabachiisuuf gaheen isaan taphachaa turan daran gadaanaa ta’uu himaniiru. Kunimmoo waldaaleen kunneen siyaasa kamirraayyuu bilisa ta’uu dhabuusanii akka ta’e dabalanii dubbatu.
Gama biraatiin ammoo waldaaleen kunneen haala barbaadaniin akka hinsochooneef haguuggiin seeraa jiru dhiphaa ta’uu dubbatu. Kunimmoo hirmaannaan waldaalee kanneenii daran akka laafu gochuurra darbee yeroodhaa yerootti dhabamaa akka deemu godheera, jedhaniiru. Kanaafis, mootummaan qofaasaa fedhii ummata biyyattii guutuu waan hindandeenyeef isaan jajjabeessuu akka qabu yaadachiisu.
Pirezidantiin Paartii Andinnat, Obbo Tigistuu Awwaluu yaada kennaniin akka jedhanitti, fedhii ummataa gama hawaas-dinagdeefi siyaasaatiin jiru guutuuf paartiileen siyaasaafi waldaaleen siivikii gahee olaanaa qabu. Kunimmoo biyyi tokko paartii biyya bulchaa jiruun qofa kan bultu osoo hintaane walta’iinsa qaamolee kanneeniiniiti jedhu. Kanaaf ammoo, waldaaleen siivikii fedhii ummataa guutuuf hojjechaa turuusaanii ija shakkiin akka ilaalan himaniiru.
Kunis, waldaaleen biyyattii keessattii hundaa’uun socho’aa turan fedhii ummataa bu’uureffachuun osoo hintaane kan ADWUI galmaan gahuuf hojjechaa turuusaanii dubbatu. Kanarraa kan ka’e ijaarsi dimokraasii, bulchiinsi gaariifi qabiinsi mirga namummaa dhugoomuu hindandeenyee, jedhu.
Kana sirreessuuf ammoo mootummaan haguuggii seeraa kennuun carraa qaamoleen kunneen qaban bal’isuu qabaa jedhaniiru. Waldaaleen hundaa’anis fedhii dhaaba tokkoo guutuuf socho’uurra hawaasa bal’aa gidduugaleeffachuun hojjechuu akka qaban gorsaniiru.
Daarektarri Dhaabbatichaafi Ambaassadarri Nageenya Afrikaa Aadde Taaddalach Darsees gamasaaniin, Itoophiyaa keessatti waldaaleen siivikii hojiilee misoomaafi siyaasaa hojjechuuf socho’aa turuusaanii yaadachiisu.
Ta’us, sochiin waldaalee kanneenii jiraatuyyuu rakkoolee gara garaarraa kan ka’e bu’aan barbaadamu dhufuu akka hindandeenye dubbatu. Kunis, beekamummaa, dhageettiifi kutannoo isaan qaban daran gadaanaadhaa, jedhu.
Kana waliinis hojii hawaasaa hojjechuuf maallaqni kan isaan barbaachisu ta’ullee bajata dhabuunsaaniis sochii kamuu akka hintaasisne godheeraa jechuun ibsu. Kana furuuf ammoo rakkoolee waldaalee kanneenirratti mul’achaa jiran hiikuun murteessaa akka ta’e hubachiisaniiru.
Guutummaa biyyattiitti nageenya, dimokraasiifi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf waldaaleen siivikii gama kamiinuu qooda guddaa qabu. Kanaaf, mootummaafi qaamni dhimmi ilaallatu rakkoolee waldaaleen kunneen qaban hiikuun dirqama ta’uusaa ogeessotni damee kanaa irratti waliigalu.
Torban kana/This_Week 33565
Torban darbe/This_Month 100001
Guyyaa mara/All_Days 1625360